Social Technologies inomhan'arira Apple pakushandisa zvisina kufanira chiratidzo chekutengesa | Ndinobva mac
Social Technologies, mugadziri weApplication ine zita rimwe chete iro Apple rave richishandisa kuratidza maavatat ayo akasarudzika, ayo anotozivikanwa pasi rese seMemoji, akamhan'ara nyaya yechipiri inoenderana nekushandiswa kwechiratidzo ichocho. Mhosva yacho yakamhan'arwa kuSouthern District Court yeNew York, inopomera Apple yekushandisa zvisizvo zita reMemoji.
Mhosva yekutanga yakaiswa mu2018 muDunhu reKumaodzanyemba kweCalifornia zvichibva pakupokana kumwe chete, Apple kushandisa zita risiri rayo seyayo.
Iko kuda kunoenderana nekushandisa iyo trademark pfungwa
Zvinoenderana nezvinodiwa, Apple isiriyo uye nehunyengeri ichizivisa Memoji sechiratidzo. Kunyanya, Social Technologies inotaura kuti Apple ine, pane webhusaiti yayo, yakanyengedza yaisanganisira Memoji muApple's runyorwa rweBrands.
Izvi zvinoreva, sekureva kwemumhan'ari, kuti Apple yakagadza mucherechedzo uye inoshambadza iyo kune vekunze nyika seyayo. Chaunofanira kuita zivisa kuti izita rekutengeserana chete kana mucherechedzo webasa, asi kwete chiratidzo chakanyoreswa. Muchokwadi, muna Chikumi 17, Social Technologies yakaongorora peji rezvigadzirwa zviri zveApple uye memoji haina kunyorwa seimwe yadzo. Nekudaro, mushure mekumhan'ara kwekutanga, runyorwa rwakavandudzwa uye rwakatoverengerwa nharo.
Kune ese aya zvikonzero, zvinokumbirwa izvo cherekedza Social Technologies seyega ine muridzi wevatengesi padanho reFederal. Kubva kuna mharidzo yeIOS 12 patinotaura nezveMemojiIsu tinofunga nezveApple, tauya kuzobatanidza kambani nemaavatat anonakidza. Inokumbirawo kuti Apple imire kushandisa chiratidzo kana chero kutevedzera kwakafanana nayo, kukuvara kwehupfumi uye kubhadhara kwemitengo yemaitiro aya nemagweta.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Social Technologies inomhan'arira Apple pakushandisa zvisina kufanira chiratidzo